China Taratasy farany vita amin'ny kraft azo atsasana Zipper Closure Makeup Bag Bag Cosmetic voajanahary orinasa sy mpamatsy | Changlin
Miorina amin'ny tontolo iainana Pu quil ...
Cosmetika Pu-tontolo iainana pu ...
Biodegradable eco-friendly ...
Kitapo vita amin'ny landihazo vita amin'ny firenena ...
Taratasy farany vita amin'ny kraft azo zohina Zipper Closure Makeup Bag Bag Cosmetic voajanahary
Araka ny anarany, ny taratasy kraft azo nosasana dia karazana fitaovana fiarovana tontolo iainana vaovao, izay be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Ny akora vita amin'ny taratasy kraft nosasana dia pulp fibres voajanahary, izay tsy misy akora manimba. Azo averina simba sy simba ary azo ampiasaina izy io.
Famakafakana amin'ny famokarana:
Material: Taratasy Kraft Weight: 42g
L20.5 * W9 * H15cm
Toerana niandohana: GUA, CN Port: Shenzhen,GZ, HK
MOQ: 5000 namboarina: nekena
fampiharana: cosmetic, toilette, ankohonana, orinasan-dia
Mahatsara azy: biodegradable,recyclable,washable
Taratasy azo nosasana
Ny taratasy vita amin'ny kraft azo nosasana dia tsy hoe manana ny hamafiny, hamafiny, fanoherana ny abrasion ary toetra mampiavaka ny taratasy kraft ihany, fa koa manana toetra mampiavaka ny lamba toy ny azo sasana, madio-madio; koa ny taratasy vita amin'ny kraft nosasana dia antsoina koa hoe "taratasy azo sorohana azo nosasana" "azo nosasana taratasy kraft "!
Amin'izao fotoana izao dia misy entana madinidinika vita amin'ny taratasy kraft azo hosasana eny an-tsena, toy ny poketra, fonosana IPAD, kitapo, poketra, fonosana notepad avo lenta sns. Ny sasany amin'ireto entana ireto dia azo kosehina alohan'ny hampiasana azy, ary aorian'ny fikosehana, ny vokatra dia hamorona endrika voajanahary, vokarin'ny fahitana voajanahary sy nostalgika kokoa!
Ny taratasy vita amin'ny kraft azo hosasana dia fitaovana ambany karbona sy tia tontolo iainana. Mamaha ny olana fa tsy mahazaka loto ny kitapo taratasy kraft ary azo sasana rehefa maloto.
fitaovana voajanahary, mora ampiasaina
Zaitra tsara, zaitra kely, tsy misy fahatapahana kofehy
Previous: Kitapo fandroana fanamiana namboarina ho an'ny kosmetika miantsena
Manaraka: Kitapo Tyvek Taratasy maharitra mateza azo soloina Zipper Famonoana kitapo Kitapo Kosmetika voajanahary
Ny Customize Service ao Changlin dia manolo-tena amin'ny famokarana harona kosmetika tsy manam-paharoa sy avo lenta hiantohana ny asanao tsara kokoa isaky ny mandeha.
Ny ekipanay dia miara-miasa akaiky aminao hamorona vahaolana tsaratsara kokoa, amin'ny fampiasana fitaovana azo havaozina sy azo havaozina miaraka amin'ny teknika tsara indrindra. Azontsika atao ny mamorona habe sy endrika kitapo fanatsarana tarehy, avy amin'ny karazana fitaovana maharitra, pirinty azo antoka, endrika vaovao, araky ny filazanao.
Miaraka amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana rehefa mitombo ny indostria, ary ny fahitana ny fampandrosoana maharitra, ankehitriny dia be dia be ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana no ampiasaina amin'ny faritra maro eto: Ny landihazo sy rongony voajanahary sy rongony dia mahazatra na aiza na aiza, RPET Material is on the fomba, raha Recycled EVA na Recycled TPU no ho fironana vaovao. Ny fitaovana fibre zavamaniry vaovao toy ny lamba mananasy sy ny akondro dia novolavolaina sy ampiasaina. Changlin dia manolo-tena hanolotra ny mpanjifanay vokatra vaovao sy vaovao, hampivelatra vokatra fiarovana ny tontolo iainana bebe kokoa, ary hanome ny herinay manokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana eto an-tany.
Kanto azo entina mivoaka amin'ny tontolo iainana polyester mavokely ...
PU Travel pasipaoro manana tapakila fiaramanidina ...
Kitapo makiazy kosmetika azo ampiasaina azo ampiasaina indray ...
Kitapom-bolo vita amin'ny Custom Custom PU Pu Cosmetic Zip Makeup Pouch ...
Kitapo landihazo ho an'ny fiantsenana kosmetika miasa
Nylon mainty fitaterana kosmetika fitetezana portable ...